အရမ်းအရေးကြီးလို့ လုံးဝမမေ့နဲ.ဗျာ  ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ လုံခြုံမှုအတွက် facebookပေါ်မတင်သင့်သော အချက်အလက်၁၂မျိုး - Khit Thit Media
အရမ်းအရေးကြီးလို့ လုံးဝမမေ့နဲ.ဗျာ  ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ လုံခြုံမှုအတွက် facebookပေါ်မတင်သင့်သော အချက်အလက်၁၂မျိုး
သင့်Facebookက လုံခြုံမှုရှိရဲ့လား? ယနေ့ခေတ်မှာ Facebookဟာ အင်အား အကြီးမားဆုံး social media တွေထဲမှ တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ လူတွေဟာ နေ့စဉ်အဖြစ်အပျက် လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကိုfacebookပေါ်မှာ မျှဝေကြပါတယ်။ဒါပေမယ့် သင့်လုံခြုံမှုအတွက် facebookပေါ်မှာ မဖော်ပြသင့်တာတွေလဲရှိပါတယ်။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ Cambridge Analytica Sandal ကိုအင်တာဗျူးပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ လုံခြုံမှုအတွက် facebookပေါ်မတင်သင့်သော အချက်အလက်၁၂မျိုးကိုသုံးသပ်ပြခဲ့ပါတယ်။
သင်ဟာမွေးနေ့ကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြင့် သင့်သူငယ်ချင်းတွေက နှစ်စဉ် မွေးနေ့ဆုတောင်းတွေတောင်းပေးကြမှာဖြစ်ပေမယ့် သင့်နာမည် လိပ်စာနဲ့အတူ သင့်မွေးနေ့ကိုသိရှိသွားပါက သင့်ဘဏ်အကောင့်နဲ့အခြားအရေးကြီးကိစ္စများမှာ လုံခြုံရေးအားနည်းသွားမှာ ဖြစ်လို့ မွေးနေ့ကို ပဟေဠိအနေဖြင့်သိုဝှက်ထားသင့်ပါတယ်။
သင်မလိုလားသူများ သို့မဟုတ် သူစိမ်းများဆီက ဖုန်းတွေဝင်လာနိုင်လို့ ဖုံးနံပါတ်ကိုမဖော်ပြသင့်ပါဘူး။
(3) credit card အသေးစိတ်
သင့်ခရက်ဒစ်ကတ်ပေါ်က နာမည်,နံပါတ်,လျှိ့ဝှက်ကုတ်စသည်ဖြင့် တစွန်းတစတောင်မဖော်ပြသင့်ပါဘူး။ဘဏ်ကတ်,ခရက်ဒစ်ကတ်,သင့်ငွေကြေးစာရင်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီး facebookမှာ လျိူ့ဝှက်ထားသင့်ပါတယ်
သင့်ရဲ့ချစ်သူသစ်အကြောင်း သူငယ်ချင်းတွေကို ကြွားချင်တာမှန်ပေမယ့် မကြာခဏ ပြတ်လိုက်ဆက်လိုက် အသစ်တွဲလိုက်လုပ်နေမယ်ဆို RS Status တင်တာမကောင်းပါဘူးတဲ့
စိတ်ရောဂါ ပါမောက္ခ Rosie Dunbarက facebook user 3000ကျော်ကိုလေ့လာရာမှာ မိတ်ဆွေစာရင်းရဲ့တ၀က်ကျော်က အပြင်မှာတကယ်ရင်းနှီးခြင်းမရှိသူများဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အပြင်မှာရင်းနှီးခြင်းမရှိတဲ့facebook friendsများကိုဖယ်ထုတ်လိုက်တာလဲ ကိုယ့်အတွက်လုံခြုံစေပါတယ်
ယနေ့ခေတ်မှာfacebookပေါ် မှာ ကိစ္စတိုင်းကိုဖော်ပြကြပါတယ်။ဒါပေမယ့် သင့်ကလေးကြီးပြင်းလာတဲ့အခါမှာ သူလမ်းလျှောက်ကာစအရွယ်ကပုံလေးတွေ တင်ထားခြင်းကိုနှစ်သက်ပါ့မလားဆိုတာ စဉ်းစားသင့်ပါတယ်
ပိုသတိထားသင့်တဲ့အချက်ပါ။သင် ကလေးငယ်ရဲ့မူကြိုလိပ်စာ,စာသင်ကျောင့်းလိပ်စာကိုဖော်ပြခြင်းဟာ သင့်ကို ဒုက္ခပေးဖိုို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့ သူစိမ်းတွေကိုအခွင့်အရေးပေးသလိုဖြစ်နိူင်ပါတယ်။
သင်နဲ့သင့်သူဌေးအဆင်ပြေနေစဉ်ကာလမှာ သူ့ပုံတင်ခြင်းဟာကိစ္စမရှိပေမယ့် နောင်တချိန်သင်သူ့အပေါ်စိတ်ပျက်လာတဲအခါ သို့ အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီ်းညည်းညူတာတွေ တင်တဲ့အခါ အရှေ့မှာသူ့အကြောင်းဖော်ပြထားတာဟာ သူ့privacy ကိုမလေးစားသလိုဖြစ်ပါတယ်
(9)check in များ
ယခုခေတ်မှာ အိုင်ဖုန်းများနှင့်androidဖုန်းများကိုသုံးပြီး ကိုယ်ရောက်တဲ့နေရာတွေကို check inတင်လေ့ရှိပါတယ်။လူပေါင်း၅၀၀မီလီယန်ကျော်ကထိုသို့ပြုလုပ်လျက်ရှိနေပါတယ်။သင်ရှိတဲ့နေရာအတိအကျကို လူတကာသိအောင်လုပိခြင်းဟာ တကယ်တော့ သင့်လုံခြုံရေးအတွက်စိတ်မချရပါဘူး။
(10)သင့်အိမ်လိပ်စာ အလုပ်လိပ်စာကို Tagတွဲခြင်း
သင်ခရီးထွက်ဖို့ဘယ်နှရက်သာလိုကြောင်း ရေတွက်ပြနေခြင်းဟာ သင့်အလစ်ကိုချောင်းနေသူအတွက် သင်အိမ်မှာမရှိမယ့်ရက်ကို ကြိုတွက်ဆနိူင်ပါတယ်။
သင့်passportနံပါတ်, Boarding Passက ဘားကုတ်များအကြောင်းမတင်သင့်ပါဘူး။မလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာများကိုဖိတ်ခေါ်သလိုဖြစ်စေလိူ့ပါ။ Credit – Writer Dr Jue(Daily Hot News)
သငျ့Facebookက လုံခွုံမှုရှိရဲ့လား? ယနခေ့တျေမှာ Facebookဟာ အငျအား အကွီးမားဆုံး social media တှထေဲမှ တဈခုဖွဈလာပါတယျ။ လူတှဟော နစေ့ဉျအဖွဈအပကျြ လှုပျရှားမှုတိုငျးကိုfacebookပျေါမှာ မြှဝကွေပါတယျ။ဒါပမေယျ့ သငျ့လုံခွုံမှုအတှကျ facebookပျေါမှာ မဖျောပွသငျ့တာတှလေဲရှိပါတယျ။ အင်ျဂလနျနိုငျငံ Cambridge Analytica Sandal ကိုအငျတာဗြူးပွုလုပျတဲ့အခါမှာ ကြှနျုပျတို့ ကိုယျရေးကိုယျတာ လုံခွုံမှုအတှကျ facebookပျေါမတငျသငျ့သော အခကျြအလကျ၁၂မြိုးကိုသုံးသပျပွခဲ့ပါတယျ။
သငျဟာမှေးနကေို့ဖျောပွထားခွငျးဖွငျ့ သငျ့သူငယျခငျြးတှကေ နှဈစဉျ မှေးနဆေု့တောငျးတှတေောငျးပေးကွမှာဖွဈပမေယျ့ သငျ့နာမညျ လိပျစာနဲ့အတူ သငျ့မှေးနကေို့သိရှိသှားပါက သငျ့ဘဏျအကောငျ့နဲ့အခွားအရေးကွီးကိစ်စမြားမှာ လုံခွုံရေးအားနညျးသှားမှာ ဖွဈလို့ မှေးနကေို့ ပဟဠေိအနဖွေငျ့သိုဝှကျထားသငျ့ပါတယျ။
သငျမလိုလားသူမြား သို့မဟုတျ သူစိမျးမြားဆီက ဖုနျးတှဝေငျလာနိုငျလို့ ဖုံးနံပါတျကိုမဖျောပွသငျ့ပါဘူး။
(3) credit card အသေးစိတျ
သငျ့ခရကျဒဈကတျပျေါက နာမညျ,နံပါတျ,လြှိ့ဝှကျကုတျစသညျဖွငျ့ တစှနျးတစတောငျမဖျောပွသငျ့ပါဘူး။ဘဏျကတျ,ခရကျဒဈကတျ,သငျ့ငှကွေေးစာရငျးမြားနှငျ့ပတျသကျပွီး facebookမှာ လြိူ့ဝှကျထားသငျ့ပါတယျ
သငျ့ရဲ့ခဈြသူသဈအကွောငျး သူငယျခငျြးတှကေို ကွှားခငျြတာမှနျပမေယျ့ မကွာခဏ ပွတျလိုကျဆကျလိုကျ အသဈတှဲလိုကျလုပျနမေယျဆို RS Status တငျတာမကောငျးပါဘူးတဲ့
စိတျရောဂါ ပါမောက်ခ Rosie Dunbarက facebook user 3000ကြျောကိုလလေ့ာရာမှာ မိတျဆှစောရငျးရဲ့တဝကျကြျောက အပွငျမှာတကယျရငျးနှီးခွငျးမရှိသူမြားဖွဈတယျလို့ဆိုပါတယျ။ အပွငျမှာရငျးနှီးခွငျးမရှိတဲ့facebook friendsမြားကိုဖယျထုတျလိုကျတာလဲ ကိုယျ့အတှကျလုံခွုံစပေါတယျ
ယနခေ့တျေမှာfacebookပျေါ မှာ ကိစ်စတိုငျးကိုဖျောပွကွပါတယျ။ဒါပမေယျ့ သငျ့ကလေးကွီးပွငျးလာတဲ့အခါမှာ သူလမျးလြှောကျကာစအရှယျကပုံလေးတှေ တငျထားခွငျးကိုနှဈသကျပါ့မလားဆိုတာ စဉျးစားသငျ့ပါတယျ
ပိုသတိထားသငျ့တဲ့အခကျြပါ။သငျ ကလေးငယျရဲ့မူကွိုလိပျစာ,စာသငျကြောငျ့းလိပျစာကိုဖျောပွခွငျးဟာ သငျ့ကို ဒုက်ခပေးဖိုို့စောငျ့ကွညျ့နတေဲ့ သူစိမျးတှကေိုအခှငျ့အရေးပေးသလိုဖွဈနိူငျပါတယျ။
သငျနဲ့သငျ့သူဌေးအဆငျပွနေစေဉျကာလမှာ သူ့ပုံတငျခွငျးဟာကိစ်စမရှိပမေယျ့ နောငျတခြိနျသငျသူ့အပျေါစိတျပကျြလာတဲအခါ သို့ အလုပျနဲ့ပတျသကျပျွီးညညျးညူတာတှေ တငျတဲ့အခါ အရှမှေ့ာသူ့အကွောငျးဖျောပွထားတာဟာ သူ့privacy ကိုမလေးစားသလိုဖွဈပါတယျ
(9)check in မြား
ယခုခတျေမှာ အိုငျဖုနျးမြားနှငျ့androidဖုနျးမြားကိုသုံးပွီး ကိုယျရောကျတဲ့နရောတှကေို check inတငျလရှေိ့ပါတယျ။လူပေါငျး၅၀၀မီလီယနျကြျောကထိုသို့ပွုလုပျလကျြရှိနပေါတယျ။သငျရှိတဲ့နရောအတိအကကြို လူတကာသိအောငျလုပိခွငျးဟာ တကယျတော့ သငျ့လုံခွုံရေးအတှကျစိတျမခရြပါဘူး။
(10)သငျ့အိမျလိပျစာ အလုပျလိပျစာကို Tagတှဲခွငျး
သငျခရီးထှကျဖို့ဘယျနှရကျသာလိုကွောငျး ရတှေကျပွနခွေငျးဟာ သငျ့အလဈကိုခြောငျးနသေူအတှကျ သငျအိမျမှာမရှိမယျ့ရကျကို ကွိုတှကျဆနိူငျပါတယျ။
သငျ့passportနံပါတျ, Boarding Passက ဘားကုတျမြားအကွောငျးမတငျသငျ့ပါဘူး။မလိုလားအပျတဲ့ပွဿနာမြားကိုဖိတျချေါသလိုဖွဈစလေိူ့ပါ။ Credit – Writer Dr Jue(Daily Hot News)
Previous Article တာမွေဈေးရှေ့ ကားနှစ်စီးနဲ့လမ်းကိုပိတ်ပြီးဓါးရှည်နဲ့လိုက်ခုတ်သတ် ပွဲချင်းပြီး ကနဦးသတင်း ( ရုပ်သံ )
Next Article လူတွေကြားမှာ မယုံနိုင်ဖွယ်ရာဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ကိုရုပ်ဆိုးနဲ့ မင်းသမီးလေးတို့ အချစ်ဇာတ်လမ်း